दशैकै दिन देशभरबाट ८ जना प’क्राउ — Imandarmedia.com
दशैकै दिन देशभरबाट ८ जना प’क्राउ
सप्तरी । सप्तरीमा एक ज्येष्ठ नागरिकको हत्या आरोपमा उनकी श्रीमती र छोरा आज पक्राउ परेका छन् । कुटपिटबाट मृत्यु भएपश्चात् फरार महादेवा गाउँपालिका १ पकरीकी ५० वर्षीया जमुनी खातुन र उनका छोरा २३ वर्षीय नइम पमरियालाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । आइतबार राति मदिरा सेवन गरेका नइम र जमुनीको कुटपिटबाट ६२ वर्षीय मो. गफुर पमरियाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
गफुरलाई उनकै श्रीमती जमुनी र कान्छा छोरा नइमले कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्दै मृतकका भाइ मो. इसराइल पमरियाले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । आरोपितलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्य शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक तिलक भारतीले बताए ।
यस्तै यता लागुऔषध (चरेश) कारोवार मुद्दामा फरार रहेका पनौती नगरपालिका–९ का २३ वर्षीय राजीव थापालाई मंगलवार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थापा दशैँमा टीका लगाउन घर आउने क्रममा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटाका अनुसार फरार रहेका थापा पर्सा जिल्ला अदालतबाट तीन वर्ष कैद र रु दुई लाख जरिवाना सुनाइएका व्यक्ति हुन् ।
‘जिल्ला अदालत पर्साले कैद फैसला सुनाएका राजीव थापा दशैँमा टीका लगाउन पनौती घर आएका बेला पक्राउ परेका हुन्’, प्रहरी प्रमुख सापकोटाले भने, ‘पक्राउ परेका थापालाई दशैँ बिदा सकिए लगत्तै जिल्ला अदालतमा बुझाउँछौँ ।’
यस्तै दशैंको दिन जुवातास खेल्ने ६ जनालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आज चितवन प्रहरीले कालिका न.पा.१ गडुवा स्थित सुवास श्रेष्ठको घरमा तास खेलिरहेको अवस्थामा ६ जनालाई नगद सहित पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरुबाट ३ बुक तास र नगद रु ३६ हजार ३ सय २५ समेत नियन्त्रणमा लिई ईप्रका टाँडीमा अनुसन्धानको लागि राखिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा कालिका न.पा.१ बस्ने बर्ष ४२ को हरि गुरुङ, सोही स्थान बस्ने बर्ष ३२ को भिम बहादुर तामाङ, बर्ष ३८ को जीवन लामा, बर्ष ३२ को बिष्णु गुरुङ, बर्ष २७ को सुवास श्रेष्ठ र बाँके नेपालगन्ज न.पा. ४ बस्ने बर्ष ६० को सन्त बहादुर गुरुङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।